गर्मी मौसममा युवतीलाई कामलाग्ने यी हुन् ९ ओटा टिप्सहरु – SN-One of the news portal in Nepal
गर्मी मौसममा युवतीलाई कामलाग्ने यी हुन् ९ ओटा टिप्सहरु
एजेन्सी २०७६ जेष्ठ १, बुधबार १७:४१ मा प्रकासित
युवकभन्दा युवती फेसनमा चुजी हुन्छन् । त्यसैले त यसवतीका फेसन आइटम हप्ता–हप्तामा बदलिन्छ । टिनेजरदेखि ३५ वर्षसम्मका युवती फेसनमा बढी नै सोख राख्छन् । गर्मीको यो मौसममा युवतीका छनोटमा पर्छन्– छोटा, हल्का, खुकुला र पातलाकपडा । तर, यस्ता कपडा रहर गर्ने युवतीले तलदेखि माथिसम्मको ड्रेसअप म्याच गर्न जरुरी हुन्छ भने कपडा छान्दा रङमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
युवतीहरुलाई गर्मीमा व्युटिफुल देखिने केी ड्रेसअप टिप्स यस्ता छन् :
१। उज्याला रङका कपडा छान्नुहोस् । सेतो, गुलाबी, निलो, सुन्तलाजस्तो रङ रोज्नु राम्रो हुन्छ । बुट्टेदार कपडा पनि गर्मीमा राम्रो हुन्छ, तर उज्याला रङमा फुलबुट्टा प्रिन्ट गरिएको रोज्नुहोस् ।
२। बुनेका विभिन्न खाले कपडा पनि बजारमा पाइन्छ । कटन, सिल्क र रेबनको रोज्नु उत्तम हुन्छ । हल्का हुने भएकाले यस्ता कपडाले शरीरमा सहज महसुस गराउँछ ।
३। जाली ९नेट० र बुट्टेदार जाली ९नेटभन्दा थोरै बाक्लो०, सिफोन जर्जेट, ९सिफोनभन्दा हल्का कडा० खालका कपडा अहिले फेसनमा छन् ।
४। गर्मीमा सजिलो र धेरै युवतीले रुचाउने जिन्स पाइन्ट हो । बजारमा विभिन्न किसिमका जिन्स पाइन्ट आएका छन् । ब्वायफ्रेन्ड जिन्स ९कम्मरको माथिसम्म पुग्ने, ग्रन्च भएको, केही खुकुलो र छोटो०, स्किनी जिन्स, डेनिम जिन्स, सर्टस ९हाफ पाइन्ट० रोज्न सक्नुहुन्छ । गमीृका लागि स्कर्ट पनि राम्रो ड्रेशअप हो । स्कर्टमा म्याच गराउन कलरफुल सर्ट नै रोज्नुहोला ।
५।गाउन पनि गर्मीको उत्तम ड्रेसअप हो । गाउन रोज्दा ट्याक्स सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । स्लिभलेस ९बाहुला नभएको०, अफ सोल्जर्स ड्रेस ९कुमको भाग नभएको० फेसनमा छन् ।
६। वान पिस पनि गर्मीका लागि हल्का ड्रेसअप हो । यसले शीतलता पनि दिन्छ । वान पिसमा केही फेसनबेल र एक्स्ट्रा देखिन चाहनुहुन्छ भने टेलहेम डिजाइनको वान पिस ९अगाडि छोटो० पछाढि लामो पुच्छरजस्तो निस्किएको लगाउनुहोस् ।
७। ड्रसअपअनुसार जुत्ता–स्यान्डल म्याच गराउनु आवश्यक हुन्छ । ओपन हिल्स, लोफर्स र हल्का स्यान्डलहरु लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
८। अफ सोल्जर्स टप्स अहिले फेसनमा चलेको टप्स हो । ड्रेसअपमा म्याच गर्न डेकोरेटिभ ब्याग, वर्ड प्रिन्ट ९अक्षर प्रिन्ट गरिएको० बकेट ब्याग छान्न सक्नुहुन्छ । सिल्क स्कार्फ र चोकर्स लगाउँदा तपाई थप आकर्षक देखिनुहुन्छ ।
९। क्याप स्लिभ, पफ स्लिभ, हाफ स्लिभ ड्रेस पनि गर्मीका लागि फरक फेसनेबल ड्रेस हो । ड्रेसअपमा क्यापको कम्बिनेसनलmे एक्स्ट्रा लुक्स दिने भएकाले ह्याट पनि गर्मीको एक फेसनेबल आइटम हो ।
श्रीमानलाई कसरी खुसी बनाउने ? १२ टिप्स
ब्रेकअपपछि भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती
एउटै गोत्रमा किन विवाह गरिँदैन ? धार्मिक मात्र होइन बैज्ञानिक कारण यस्तो
पुरुषहरुकाे लागि पनि आयो गर्भनिरोधक चक्की
भारततर्फ लैजाँदै गरेका ११ जनाको मोरङबाट उद्दार
बामदेब र माधवकुमार नेपाललले पाउने भए यस्तो जिम्मेवारी